Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 17)
Ukuphonononga iBluboo D5 Pro, olona phoxo lukhulu !!
Apha sikushiya uphononongo olupheleleyo lwevidiyo yeBluboo D5 Pro, uphononongo lwevidiyo kunye noluvo ngaphandle kokuncwina amagama apho sikuxelela konke okuhle nayo yonke into embi malunga nenqanaba lokungena le-Android.
I-Samsung Galaxy S9 Mini ivuze kwividiyo
Ividiyo evuzayo uyilo lweGlass S9 Mini. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-Samsung, ekulindeleke ukuba ifike kwintengiso kulo nyaka.
Ukucaciswa okuvuzayo kwe-Honor 9i, phakathi kwinqanaba eliphakathi lenkampani
Ukuhlaziywa kweHloniphe 9i kusaza kuza. Kutshanje kwi-TENAA, i-Honor LLD-AL20 kunye ne-LLD-AL30 iifowuni-amagama aphambili. Baye bangena kwindawo yogcino lwedatha yendawo ngaphandle kwezibonelelo ezingathathelwa ngqalelo ngokungathandabuzekiyo ezitsala umdla. Esi sixhobo sikhutshwe kwiphepha elinamahlelo amabini.
Imifanekiso emitsha yeMoto Z3 Play idityanisiwe
Ukucoca imifanekiso emibini emitsha yeMidlalo yeMoto Moto Z3. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca ephezulu, enemifanekiso yokuqala esele ivuziwe.
INokia X6 ithengisiwe kwakhona kwintengiso yayo entsha
INokia X6 ithengisa kwintengiso yayo entsha eChina. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo enayo xa usungulwa e-China.
IVivo Z1 iphehlelelwe e-China njengaphakathi kuluhlu oluphakathi. Yazi!
I-Vivo isizisela i-Vivo Z1, uluhlu lwayo olutsha oluphakathi olusele luyinxalenye yekhathalogu yenkampani enexabiso elihambelana noko ikuthembisayo. Esi sixhobo siza noyilo olusikhumbuza nge-Apple X ye-Apple, iflegi yangoku yenkampani yaseMelika. Siyakwandisa!
Ifowuni ebalulekileyo yesi-2 irhoxisiwe ngokusisigxina
Ukukhutshwa kweFowuni ebalulekileyo ye2 kuye kwarhoxiswa. Fumanisa ngakumbi malunga nezizathu zokuba kutheni inkampani ingazukuvula ifowuni kwintengiso, ngokukaAndy Rubin ngokwakhe.
Isamsung iyalelwa ukuba ihlawule i-539 yezigidi zeedola ukukopa iApple
Isamsung kuya kufuneka ihlawule i-Apple $ 539 yezigidi. Fumanisa ngakumbi malunga nokuhlawulwa kwenkampani yaseKorea yokukopa uyilo lwe-iPhone yoqobo.
I-Bixby iya kuba kuzo zonke iimveliso ze-Samsung ngo-2020
Zonke iimveliso ze-Samsung ziya kusebenzisa i-Bixby ngo-2020. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani yaseKorea zokuba iimveliso zayo zisebenzise iwizard.
Ukuphonononga iAermoo M1
Dibana ne-Aermoo M1, eyinyani "ejikelezayo" ene-IP68 certification, ikhamera ye-21 Mpx, ukhuselo lokothuka, ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nebhetri enkulu ye-5580 mAh
UXiaomi kunye neApple balawula intengiso enxibekayo
UXiaomi kunye noApple babangisana ngobunkokheli kwimarike enxitywayo. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa kweentengiso kweli candelo leewotshi ezifanelekileyo kunye neentsimbi, eziqhubeka nokukhula.
I-LG izakwazisa i-LG V35, X5 kunye ne-X2 eMzantsi Korea ngoJuni. Fumana ngakumbi malunga neefowuni eziza kusungulwa ngumenzi kwilizwe lakho kuyo yonke inyanga kaJuni.
I-Qualcomm Snapdragon 710: Inkqubo entsha ye-mid-range processor. Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa entsha esele iqalisiwe yoluhlu lwaphakathi kuluhlu lwayo.
RUMOR: USony angayeka ukwenza ii-smartphones. Fumana ngakumbi malunga nezi ndaba zinokuthetha ukuba uphawu lwaseJapan luyeka ukuvelisa iifowuni eziphathwayo.
IVivo Apex iya kuziswa ngokusesikweni ngoJuni 12
Lo ngumhla osemthethweni wentetho yefowuni yeVivo Apex elandelayo enescreen esigcweleyo kunye neminwe yeminwe kwiscreen
I-Meizu M6T ivela kwi-Geekbench nge-Spreadtrum SoC
I-Meizu M6T yenze imbonakalo yamva nje kwindawo yogcino lwedatha yeGeekbench, yenye yeebenchmark ezidumileyo phaya ecaleni kweAnTuTu. Esi sixhobo siza kunikwa amandla, ngokwamanqaku abonelelweyo, ngumqhubekekisi we-Spreadtrum firm ... Sithetha nge-SC9850.
I-Twitter ye-Android TV iyakuyeka ukusebenza ngomso
Ngomhla we-24 kaMeyi, isicelo se-Twitter se-Android TV siza kuyeka ukusebenza kwaye siyakunyamalala kwivenkile yesicelo yezixhobo ezifanelekileyo.
ImediaTek Helio P22: Iprosesa entsha ekumgangatho ophakathi
Helio P22: Inkqubo entsha yeMediaTek kuluhlu oluphakathi. Fumana ngakumbi malunga neprosesa entsha ethi uphawu lwesiTshayina lubonelele kuluhlu oluphakathi, icandelo elikhulayo.
Ukufika kwe-LG Q7 kuqinisekisiwe eSpain. Lazi ixabiso lalo!
Isigebenga saseMzantsi Korea i-LG kutshanje siqinisekisile ukuba i-LG Q7 izakufika kumhlaba waseSpain, kwaye, nangona ingakhange ityhile owona mhla kanye esiya kubona ngawo olu luhlu luphakathi luziswe izolo, sele sinalo ulwazi malunga nokungabizi kangako. Ixabiso kunye naloo nto iya kuchazwa.
Ukuthengisa kukaLenovo kuyaqhubeka ukwehla kakhulu eTshayina
ILenovo imele nje iipesenti ezi-0,4 zeemarike e-China. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa okuncinci kwe-China, apho ilahlekelwe sisabelo sayo sentengiso.
Inkqubo yokwamkelwa kobuso iza kwi-Mate 9 kunye ne-Mate 9 Pro
Uhlaziyo lwamva nje lokuba iHuawei Mate 9, Mate 9 Pro kunye neMate 9 Porsche Design bayifumene inikezela ngenkqubo yokwamkelwa kobuso ukuvula itheminali.
I-HTC U12 +: Iimpawu eziSanda kuvuza kunye ne-Specs… Namaxabiso ayo!
Ngenye imini emva kokunikezelwa kwayo, amaxabiso kunye neenkcazo ze-HTC U12 + zihluziwe, iselfowuni entsha yaseTaiwan eya kuthi ifike kwintengiso nge-SD845 SoC, ngescreen esikumgangatho ophezulu esingayi kumonela omnye umntu, kunye nezinye iimpawu oko ngokungathandabuzekiyo kuya kukonyusa ukuthengisa kohlobo.
Ukuphononongwa kweFluid + yeFom Eagle 4K, umgangatho ophezulu wekhamera yesenzo esinexabiso eliphantsi
Ukuba ujonge ikhamera elungileyo, entle nexabiso eliphantsi, awunakuphulukana nolu vavanyo lupheleleyo lwevidiyo yeFluid + yeFom yekhamera, ikhamera yexabiso eliphantsi elifanele ubunzima bayo kwigolide.
Iifowuni ezili-10 ezinamandla zika-Epreli 2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
I-AnTuTu isizisela uluhlu lwezona zixhobo zinamandla kwintengiso yenyanga ngenyanga, apho, kwesi sihlandlo, sinokuthi siqaphele ukongezwa kweXiaomi Black Shark, i-smartphone entsha yomdlalo weqonga eyasungulwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo yinkampani yaseTshayina. Siyakwandisa!
Inkonzo yokusasaza umculo uTidal utyholwa ngokukhohlisa idatha
Inkonzo yomculo yokusasaza kukaTidal ijongene nothotho lweengxaki nabanye babazobi bayo, ngenxa yamanani ekucingelwa ukuba anemveliso kwakhona.
Iifowuni zevidiyo zeqela kuWhatsApp ziqala ukufikelela kubasebenzisi
I-WhatsApp iqala ukwazisa iqela levidiyo. Fumanisa ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kule app, iiveki ezimbalwa emva kokungeniswa kwayo.
Isamsung ihlekisa nge-iPhone kunye 'neBatterygate' kwintengiso yayo entsha
Isamsung yazisa ngentengiso entsha ehlekisa ngeApple. Fumana ngakumbi malunga nentengiso entsha yaseKorea apho okhuphisana naye ophambili ugculelwa.
I-Fortnite ye-Android iza kuphehlelela ngokusesikweni kweli hlobo
I-Fortnite iza ngokusemthethweni kwiifowuni ze-Android kweli hlobo. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa komdlalo omtsha ababewulindile abasebenzisi abaninzi. Kuqinisekiswe yiMidlalo ye-Epic.
Imbeko 10 iyathengisa ngosuku lwayo lokuqala eYurophu
I-Honor 10 iphela kwisitokhwe kwiintsuku zayo zokuqala eYurophu. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yesiphelo sophawu lwesiTshayina ekumiselweni kwayo eYurophu.
Yintoni eyayilahlekile! UFacebook ngoku usicela imvume yengcambu
Isicelo se-Facebook sicela abasebenzisi imvume yengcambu. Fumanisa ngakumbi malunga ne-bug ethe yafunyanwa kwisicelo ebuza abasebenzisi ukuba banike imvume yeengcambu
I-Bixby 2.0 iya kukhawuleza kwaye ikuqonde ngcono
I-Bixby 2.0 iya kubaleka ngokukhawuleza kwaye imqonde ngcono umsebenzisi. Fumana ngakumbi malunga nophuculo oluya kuqaliswa kwinguqulelo entsha yomncedisi wenkampani oza kufika kulo nyaka.
Iinkcukacha ezintsha ezivuzayo ze-Samsung Galaxy J4 ityhiliwe
Uthotho lwe-J losapho lwe-Samsung Galaxy luzakufumana i-Samsung Galaxy J4, ilungu elitsha eliza kufika kungekudala. Ngosuku ngalunye oludlulayo, kuyacaca ukuba esi siphelo silandelayo siza kufika, kwaye iyakwenza njalo ngendlela egcinakeleyo enkosi kwiimpawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezixhotyiswayo.
Isamsung inokuthengisa iprosesa ye-Exynos kwi-ZTE
I-ZTE kwiintetho zokuthenga iiprosesa ze-Samsung Exynos. Fumanisa ngakumbi malunga nonxibelelwano phakathi kweenkampani ezimbini ezinokuthi zisayine isivumelwano sokuthengwa kweeprosesa.
Fumana i-Pepephone Unbeatable rate ngexabiso elifanelekileyo. Fumana ngakumbi malunga noku kukhuthazwa apho ungafumana elona zinga liphezulu nge-19 GB yedatha yeselfowuni kunye neefowuni ezingenamda ngexabiso elifanelekileyo.
INetflix kwi-HDR ngoku iyahambelana ne-Sony Xperia XZ2, iHuawei P20 kunye neMate 10 Pro
I-Xperia XZ2, iHuawei P20 kunye ne-Mate 10 Pro inkxaso yeNetflix HDR. Fumana ngakumbi malunga neemodeli ezinokuthi zivele zivelise ezi ziqulatho kwisisombululo esona silungileyo.
INokia 2, 3 kunye ne-5 (2018) inokuboniswa ngoMeyi 29
AbakwaNokia bangabonisa iNokia 2, 3 kunye ne-5 (2018) ngoMeyi 29. Fumanisa ngakumbi malunga nomsitho olungiselelwe uphawu ukuba uphele inyanga eRussia apho siza kudibana khona neefowuni ezintsha.
Inyaniso ye-ARCore eyongeziweyo iza kwi-LG G6, Xperia XZ1 kunye nezinye ezininzi
I-ARCore, inyani eqinisekisiweyo kaGoogle ifikelela kwiifowuni ezininzi. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqhubela phambili kwenyani yenkampani eyinyani ezayo kwiifowuni ezintsha ze-Android.
Isamsung ithumela isimemo sokwazisa ngeGlass J6 kunye neGalaxy J4
Isamsung ithumele isimemo somboniso weGlass J6 kunye neGalaxy J4, fumana ezinye iinkcukacha ezingezantsi.
INokia X6 isemthethweni! Yazi yonke into malunga noluhlu oluphakathi
Dibana neNokia X6, ibanga elitsha eliphakathi elisandula ukwaziswa ngokusemthethweni e-China, kwaye iya kufumaneka kwintengiso kwiintsuku ezizayo ngexabiso ngokuhambelana nayo yonke into ethembisa yona. Yazi zonke iinkcukacha zobuchwephesha kunye neempawu!
I-Elephone iya kuvula umzi-mveliso wayo kweli hlobo
U-Elephone ulungiselela ukuvula umzi-mveliso wawo ehlotyeni. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani yaseTshayina yokuqalisa ukuvelisa iifowuni zayo.
AbakwaNokia baqinisekisa ukuba iNokia 5 kunye ne-6 iya kuba ne-Android P
INokia 5 kunye no-6 ziya kuba nohlaziyo ku-Android P.Fumanisa ngakumbi malunga nokuhlaziya okuza kuza kwiifowuni ezimbini zohlobo, esele iqinisekisiwe yinkampani.
Ulutsha lwe-Oppo F7 luvela nge-AI kwikhamera engaphambili
Sikunikezela ngedatha yokuqala yoLutsha lwe-Oppo F7, uguqulelo oluncitshisiweyo lokuphela kwesiphelo sika-Oppo kunye ne-AI kwikhamera yangaphambili yeeselfie ezingcono.
I-Android P iya kubonisa imicimbi ezayo kwiscreen sokutshixa
Inguqulelo elandelayo ye-Android P isinika ulwazi malunga neziganeko ezizayo kwisikrini sokutshixa, ngendlela eyahlukileyo kunokuba umqalisi wePixel 2 eyibonisa njani namhlanje.
Ukuphonononga uNomu M6
Dibana neNomu M6, eyona intle kwaye inesitayile esirhabaxa esirhabaxa kwimarike ngexabiso elimangalisayo. Ayizizo zonke "iifowuni ezinemigca" ezifanayo. Fumanisa iimpawu zayo, ixabiso kunye nazo zonke iinkcukacha zale mobile off-kwendlela.
UGoogle uya kwenza ukhuseleko lube sisinyanzelo
UGoogle wenza ukubonelela ngezokhuseleko. Fumana ngakumbi malunga nenkqubo entsha yenkampani ukukhusela abasebenzisi abaninzi kangangoko kunokwenzeka.
Ukucaciswa kobuchwephesha kweVivo X21i ngokweTENAA
Namhlanje, i-TENAA, isiqinisekiso sase-China kunye nomlawuli apho zonke ii-smartphones eziza kuthengiswa kweli lizwe kufuneka ziqinisekiswe, zityhila iimpawu ezininzi zeVivo X21i, isixhobo esineempawu ezifanayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha njengeX21.
Thatha ithuba lesaphulelo se-50% kwiVodafone One Light rate
Ukukhanya kweVodafone One: 50% isaphulelo kweli nqanaba. Fumana ngakumbi malunga neli nqanaba lokudibanisa elidibanisa i-Intanethi ekhaya, iifowuni ezisendlini, idatha yeselfowuni kunye neefowuni ezisuka kwiselfowuni yakho, ngoku ukwenyusa.
Umncedisi kaGoogle: Iindaba ezithiwe thaca kuGoogle I / O 2018. Fumanisa ngakumbi malunga neendaba eziza kwenziwa ngumncedisi wenkampani kungekudala. Zonke zibonisiwe kuGoogle I / O 2018.
Imfuno ye-Smartphone yehla i-34% e-China
Imfuno yee-smartphones e-China yehla ngama-34%. Fumana ngakumbi malunga nokwehla kwentengiso yefowuni elizweni kwikota yokuqala yonyaka.
I-Android P ayiyi kuvumela ii -apps ukuba zihlole unxibelelwano olusebenzayo
I-Android P iya kuthintela usetyenziso ekuboneni unxibelelwano olusebenzayo. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza nenguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza.
Izicelo zikaGoogle ze-Android ziya kukhupha ii icon ezintsha
Izicelo zikaGoogle ze-Android ziya kuba neempawu ezintsha. Fumana okuninzi malunga nolu tshintsho olwaziswa kwiimpawu zezicelo zikaGoogle.
Iimidlalo ezine zePokémon ezilungileyo ze-Android. Fumana ngakumbi malunga nokukhethwa kwemidlalo ngaphakathi kwesaga eyaziwayo esiyifumana kwiifowuni ze-Android.
Izifundo zikaFacebook zisungula uhlobo olungenazintengiso ngokubhalisa
I-Facebook iya kuvula ingxelo engenazintengiso ngokubhaliselwa. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenethiwekhi yokuqalisa ingxelo ehlawulelweyo.
I-Adobe Photoshop Express ihlaziywa ngokongeza umsebenzi woLungiso lokujonga
Umhleli wesithombe esimnandi seAdobe Photoshop Express ufumene uhlaziyo lokongeza into entsha abanye abasebenzisi ekudala bayilindile: ukulungiswa kombono.
Eyona midlalo ilungileyo yemidlalo ye-Android
Eyona midlalo mine ilungileyo yezemidlalo yamanzi ye-Android. Fumanisa ngakumbi malunga noku kukhethwa kwemidlalo esikhoyo ngoku kwi-Android.
I-1 GB yedatha yeselfowuni ngexabiso elilelona liphezulu enkosi kuRepública Móvil
Fumana ngakumbi malunga neli nqanaba leRiphabhlikhi yeFowuni ekubonelela nge-1 GB yedatha yeselfowuni onokuhamba ngayo ngenyanga ngexabiso elifanelekileyo, nge-3,95 euro kuphela. Qasha ngoku!
Ezonaapps zilungileyo zosuku loomama
Kolu luhlu unokufumana ezona zicelo zibalaseleyo zosuku loomama, ukuphumla, ukuphumla kunye neenethiwekhi zentlalo.
Iimpawu zesiphelo esitsha esisezantsi se-Asus ZenFone Live L1 nge-Android Go
Dibana ne-Asus ZenFone Live L1, inkampani yokuqala ye-Android Go eyasungulwa eIndonesia ngobuchwephesha kunye neempawu eziqhelekileyo zoluhlu olusezantsi, kunye nabanye abasemngceleni ophakathi. Sinikela kuwe!
UFacebook F8: Zonke iindaba eziziswe kwinkomfa
I-Facebook F8: Iindaba eziboniswe kumsitho. Fumana ngakumbi malunga nazo zonke iindaba ezivezwe yinkampani kulo msitho.
Uhlaziyo lwe-Android 8.1 Oreo lumisiwe kwiRazer Ifowuni
Ukuhlaziywa kwefowuni yeRazer kwi-Android 8.1 Oreo imisiwe. Fumana ngakumbi malunga nezizathu zokuba kutheni ukuhlaziywa kwefowuni kumile emva kokungaphumeleli kweSIM.
IColppad epholileyo 2, ifowuni entsha ekumgangatho ophakathi evela eAsia
ICoolpad isandula ukwazisa nge-smartphone yayo yamva nje ephakathi: i-Coolpad Cool 2, eyindlalifa kwi-Coolpad Cool yokuqala ephehlelelwe ngo-Agasti ka-2016 eyayikhatshwa sisikrini se-16: 9, iprosesa ye-Qualcomm SD652 octacore, 4GB ye-RAM, kunye I-32GB yeROM. Yazi!
Eyona midlalo mihle ye-Android
Iimidlalo ezine ezilungileyo kakhulu ze-Android. Fumana ngakumbi malunga nemidlalo ye-hacker eya kusenza sizive sinamava okwenyani. Iyafumaneka kwiVenkile yokuDlala.
Ezona zicelo zibalaseleyo ze-Android zabaguli abangena komzimba
Ezona zicelo zine ziphambili ze-Android zabaguli abanengxaki yokungezwani komzimba Fumanisa olu khetho lwezicelo ze-Android eziluncedo olukhulu kubantu abanezigulo zee-aleji.
Intshutshiso entsha A3. Yazi iimpawu zayo kunye neenkcukacha zobugcisa!
U-Oppo, isigebenga saseTshayina, usinika ilungu elitsha eliphakathi kwinqanaba: i-Oppo A3, i-terminal eneenkcukacha kunye neempawu ezifanelekileyo ze-smartphone enamandla kunye nexabiso eliphantsi. Phakathi kweempawu ezibalaseleyo kwesi sixhobo, sifumana isikrini esikhulu esingaphezu kweesentimitha ezi-6.
I-Android Go iya kuza nakwii-mobiles ze-Samsung
Isamsung iya kusebenza kwifowuni ye-Android Go. Fumana ngakumbi malunga noku kuvuza okubonisa ukuba inkampani iya kuphehlelela isiphelo esisezantsi nge-Android Go.
I-Spotify ibeka ukuphela kwemowudi yokunciphisa kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwedatha yeselula nge-75%
I-firm yaseSweden i-Spotify ibhengeze iindaba eziza kufika kwiiveki ezimbalwa ezizayo kwinguqulelo yasimahla yeSpotify kwaye phakathi kwayo ukuphela kokuphindaphindwa kwengoma kumile.
I-Asus enkulu yase-Taiwan, isizisela i-Asus ZenFone Max Pro M1, iselfowuni ekumgangatho ophakathi eneenkcukacha kunye neempawu ezihlengahlengisiweyo kubaphulaphuli bemfuno eziphakathi kodwa benxanelwe isiphelo sendlela elungileyo. Yazi iimpawu zayo kunye neenkcukacha zobugcisa!
Umncedisi kaGoogle uya kufunda ukuba loluphi unxibelelwano osapho lwakho
Umncedisi kaGoogle uya kwazi ukuba loluphi unxibelelwano osapho lwakho. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kuza kungekudala kumncedisi wenkampani oya kuthi abavumele ukuba bakukhumbuze ngemihla yabo yokuzalwa.
Ukwenza ngokwezifiso amaqhosha e-Android kwiscreen ngaphandle kwemfuno yeengcambu. [I-Android 7.0+]
Ingcebiso yevidiyo endikubonisa kuyo isicelo simahla se-Android esiya kuthi sivumele ukuba senze ngokwezifiso amaqhosha e-Android kwiscreen ngaphandle kwesiphelo esineengcambu.
I-Jazztel's 50Mb symmetric fiber ngoku iyathengiswa
Yonwabela i-50Mb yefayibha ehambelanayo kunye nokwazisa okutsha kweJazztel okusizisela inqanaba layo leenkwenkwezi ngexabiso elikhethekileyo kangangexesha elithile. Ukuba ufuna ukugcina kwityala lakho lefowuni, khawuleza.
IRashiya icela uGoogle ukuba asuse iTelegram kwiVenkile yokudlala
Urhulumente waseRussia wenza konke okusemandleni akhe ukuthintela abemi ukuba baqhubeke nokusebenzisa iTelegram, ngoku bafuna ukucima usetyenziso ezivenkileni.
I-Movistar ye-50 MB yeFiber Optic Rate ngoku ekunyuseni
Fumana i-Movistar ye-50 Mb Fibre Optic Rate ngoku ngexabiso elikhethekileyo. Fumanisa okungakumbi malunga nale nyuso intsha yomniki osinika eli nqanaba ngexabiso elithile lokuthengisa. Khawulezisa!
I-WhatsApp Plus, usetyenziso olusebenzisa ulwazi lwakho. Sukuyisebenzisa!
Dibana noWhatsApp Plus, usetyenziso oluyingozi olungekho mthethweni olusiba idatha yakho oluza nengcinga yokuba "unemisebenzi engaphezulu", ebandakanya ukubanakho ukufikelela kwiiakhawunti ezine ngaxeshanye kwisixhobo sakho. Fumanisa ukuze ungangeni kulo mgibe ukhohlisayo!
I-Russia ibhloka iTelegram ngokwala ukuhambisa izitshixo zokubethela
Urhulumente waseRussia ulandele isoyikiso sakhe kwaye ekugqibeleni uye wakuvalela ukusetyenziswa kweTelegram kweli lizwe, ngokwala ukuhambisa izitshixo zokubethela.
Ikea Trådfri iibhalbhu ziyahambelana neKhaya likaGoogle kunye noMncedisi kaGoogle
I-Ikea's Trådfri ngoku iyahambelana noMncedisi kaGoogle kunye neKhaya likaGoogle. Fumanisa ngakumbi ngokuhambelana kwezi bhalbhu kwinkampani yaseSweden nomncedisi.
INokia 1: Inkampani ye-Android Go ifika eSpain
Inkampani yaseFinland iNokia, emva kokungenisa iNokia 1 kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola e-Barcelona, ​​izisa eSpain olu hlobo lwexabiso eliphantsi lwe-Android Go, inkqubo ye-Android engasindi ejolise kwiifowuni ezinesiphelo esinezixhobo ezinqabileyo.
Isamsung Pay kunye nePayPal ziqala ukudibanisa eUnited States
I-Samsung Pay kunye ne-PayPal zidityanisiwe eMelika. Fumana ngakumbi malunga nokudityaniswa kwezi zintlu zokusebenza zonyaka omnye emva kokubhengezwa.
Eyona midlalo ilungileyo yeconsole ehlengahlengiswe kwi-Android
Imidlalo yeConsole elungiselelwe iifowuni ze-Android. Fumana ngakumbi malunga nokukhethwa kwemidlalo ekhutshwe kwizikhombisi kwaye ngoku ziyafumaneka kwi-Android.
IPixel 3 ivuza ngempazamo kwikhowudi ye-Android
Ikhowudi ye-Android ngengozi ivuza iPixel 3. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqinisekisa ukuba inkampani isebenza kwiPixel entsha enkosi kwikhowudi ye-Android.
IMásMóvil inikezela ngefayibha entsha, isilungiso esisisigxina kunye neselfowuni ngokwenyusa amaxabiso
Ifayibha entsha, inqanaba elimiselweyo kunye nenqanaba lokuhamba ukusuka eMásMóvil kunyuselo. Fumanisa ngakumbi malunga neli nqanaba litsha eliya kumiliselwa ngumqhubi ngokunyusa amaxabiso kwiinyanga ezintathu zokuqala. Funda ngakumbi malunga nenqanaba kunye nekhontrakthi apha.
Le yi-Hisense V +, ibanga eliphakathi kunye ne-Snapdragon 660 SoC
Dibana ne-Hisense V +, ibanga elitsha eliphakathi lenkampani elibhengeze kutshanje. Inqaku elomeleleyo lale fowuni uyilo lwayo, ukongeza kwicandelo langaphakathi elilungileyo apho sifumana khona i-chip yeQualcomm SD660 chip, i-6GB RAM, nokunye. Sinikela yona apha ngezantsi!
Uhlalutyo lweBlackview BV 9000 Pro
I-Blackview BV 9000 Pro, eyona ndlela ilungileyo ye-smart-off yendlela ngalo mzuzu ngamanani afanelekileyo aphezulu kuluhlu. "Ukungena kwamanzi" okwenene esiye savavanya. Ingaphezulu kwefowuni erhabaxa
I-Asus ZenFone 5 iya kuphehlelelwa nge-12 ka-Epreli eTaiwan
Isigebenga saseAsia uAsus sele emisele umhla wokuphehlelelwa ngokusesikweni kweZenFone 5 yaseTaiwan, isiphelo sendlela esele sikuxelele ngaso amatyeli aliqela, eboniswe nge-27 kaFebruwari kumsitho okhankanywe ngasentla. Umhla omiselweyo ngu-Epreli 12. Siyakwandisa!
Intlawulo yokuguqula iYoigo: Umnxeba wokuqala weSelfowuni ngeDatha engenamda
Fumanisa ngakumbi malunga nqanaba elitsha athe umboneleli wenkonzo abeke lona elibeka umzekelo kwimarike yelizwe yokufumana idatha engenamda. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ixabisa malini?
UGoogle uya kusebenza kwiPixel ebiza kakhulu
UGoogle uzakwazisa ngePixel ebiza kakhulu kwintengiso yalo nyaka. Fumanisa ngakumbi malunga nemodeli entsha efuna ukwenziwa yibhrendi, eya kuthi ngexabiso eliphantsi kwaye ibe kwinqanaba eliphakathi.
I-Mini yeNubia Z18 iya kuboniswa nge-11 ka-Epreli
INubia Z18 Mini ityhilwe ngokusesikweni ngo-Epreli 11. Fumana ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yefowuni entsha kraca, eya kwenzeka kwisithuba nje esingaphezulu kweveki.
Ukucocwa kokuqala kokucaciswa kweSpapdragon 841
I-Snapdragon 841: Ukucaciswa kokuqala kuvuza. Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa yokuphela kweprosesa entsha ekulindeleke ukuba ifike kwintengiso kulo nyaka.
Ukucaciswa, umhla wokukhutshwa kunye nexabiso leVivo Y71 kuhluziwe
Sikuxelela zonke iinkcukacha ngefowuni ekumgangatho ophakathi weVivo Y71, iimpawu zayo, umhla wokuqaliswa kwayo kunye nexabiso elinokubakho.
Ukuthelekiswa kokusebenza phakathi kweGPS S8 + kunye neGPS S9 +
Kubasebenzisi abaninzi, iibhentshi okanye uvavanyo lokusebenza kwezixhobo ziyinto engabalulekanga, kuba ...
Isundu siza kubuyela kwintengiso ngefowuni ye-Android
Isundu sibuyela kwintengiso ngo-2018 ngefowuni yokuqala ye-Android. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani evuselela ifowuni, nangona kule meko iya kuba sisixhobo se-Android.
Sele sineentsuku ezili-14 zokubuyisa nakuphi na ukuthengwa kwedijithali kuGoogle Play
Ukuziqhelanisa nemithetho yaseYurophu, abafana bakwaGoogle bandise ixesha lokubuya kwezicelo okanye imidlalo esele siyithengile.
I-ARCore 1.1 iza kwi-Samsung Galaxy S9, iHuawei P20, iXiaomi Mi Mix 2S kunye nokunye
I-Samsung Galaxy S9, iHuawei P20, iXiaomi Mi Mix 2S ifumana i-ARCore 1.1. Fumanisa ngakumbi malunga neNyaniso yoKwandiswa kweGoogle eza kwiifowuni ezintsha ngohlaziyo olutsha.
UGoogle uthenga i-Tenor GIF yokukhangela
Iifayile kwifomathi ye-GIF ziyeyona ndlela ixhaphakileyo yokubonisa iimvakalelo zethu, iimvakalelo zethu ...
Isityholo sokuvuza kwe-OnePlus 6 kwiGeekBench kwaye ezi ziimpawu zayo
I-OnePlus 6 isanda kuhluzwa kwi-GeekBench, yenye yezona ndawo zaziwayo kunye ne-AnTuTu, kwaye ngezibonelelo ezibonakalisiweyo, ziya kuza nezibonelelo ezifanelekileyo zokuphela kuthi, ngaphandle kwamathandabuzo amancinci, ujonge ukuthatha indawo yentengiso ngee-specs ezinamandla.
Ukuphonononga iLA Silk
Ukuphononongwa kwe-iLA Silk i-smartphone enescreen se-intshi ye-5,7, 13 - 8 Mpx khamera ezimbini ezinoyilo olugqwesileyo olungayi kukushiya ungakhathali. Ngaba kufanelekile ukuthenga? Athini amandla akho kunye nobuthathaka bakho? Yifumanise apha.
Ezona zicelo zinomdla kwi-Android
Izicelo ezi-4 ezinomdla zeefowuni ze-Android. Fumana ezi zicelo zoqobo onokuzikhuphela ngoku kwifowuni yakho ye-Android ngendlela elula.
Abasebenzisi abanescreen esikhudlwana basebenzise iselfowuni ixesha elide
Abasebenzisi abanezikrini ezinkulu basebenzisa iifowuni eziphathwayo ixesha elide. Fumana ngakumbi malunga nolu phononongo lubonisa ubudlelwane phakathi kokusetyenziswa kwescreen nexesha umsebenzisi alisebenzisa esebenzisa ifowuni.
Ukuhlaziywa kwetelegram kuhlobo lwe-4.8.5 ngeendaba ezahlukeneyo
Uhlaziyo lweTelegram kuhlobo lwe-4.8.5 kwaye luzisa ukuphuculwa okuninzi. Fumana ngakumbi malunga nophuculo oluzayo kwinkqubo yemiyalezo kolu hlaziyo lutsha.
IVivo V9 ngoku isemthethweni, kwaye ezi yinkcazo kunye neempawu zayo zokugqibela!
IVivo iveza iVivo V9, itheminali eza noyilo olufana nolo lwe-iPhone X eyaziwayo, kodwa, ukongeza koku, iza nezibonelelo ezininzi, ngaphandle kwamathandabuzo, ezenza ukuba ibe ngumnxeba weselfowuni ongenanto Umona abanye bakuluhlu olufanayo. Siyakwandisa!
Uhlalutyo lweCubot X18 Plus
Uhlalutyo lweCUBOT X18 Plus, i-smartphone edibanisa ikhamera ye-Sony 20 + 2 Mpx kunye ne-5,99-intshi screen enegunya leprosesa eqinisekisiweyo ene-4 GB ye-RAM kunye nokugcinwa kwe-64 GB.
Isamsung Exynos 9610: Iprosesa ezisa ubukrelekrele bokufakelwa kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu
I-Exynos 9610: Iprosesa entsha ye-premium mid-range. Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa entsha evela kuhlobo lwaseKorea oluzisa ubukrelekrele bokufakelwa kwiifowuni zaphakathi ze-Samsung zepremiyamu.
ILytro: Itekhnoloji eya kuthi incede ekuphuculeni ikhamera yePixel
ILytro: Itekhnoloji ithengwe ngokusemthethweni nguGoogle. Fumanisa ngakumbi malunga netekhnoloji eyithengileyo inkampani kwaye ithembisa ukuyifaka isicelo kumabala afana nokwandiswa okwenyani kunye nenyani kunye nekhamera yePixel.
I-WhatsApp iza kuza kwiNokia 8110 entsha kunye nezinye ezingezizo ii-smartphones
UWhatsApp uza kuphehlelela iifowuni ezinje ngeNokia 8810. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zomsebenzi wokuthumela imiyalezo kwiifowuni ezinje ngemodeli entsha yakwaNokia.
Dibana neVivo X21, i-smartphone esiza kuthetha ngayo ngokulandelayo, kwaye iza ne-19 enkulu: umboniso we-9 uyilo lwenotshi ngaphezulu, kunye nezinye izinto zangaphakathi eziza kuyibeka kumbango ophakathi- phezulu ukuba banyathela ngesiqingatha seenyawo phezulu kuluhlu lwe-Android.
I-Deutsche-Telekom izakuyeka ukwenza ngokwezifiso ii-smartphones. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo somqhubi waseJamani ophawula ukuphela kwebloatware yabasebenzisi.
U-Helio P60 ngoku usemthethweni: Iprosesa entsha yaphakathi kuluhlu
Helio P60: Iprosesa entsha yaphakathi kwinqanaba le-MediaTek. Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa entsha yaphakathi ye-brand esezichaziwe ngokusemthethweni kwaye yeyona processor ilungileyo yohlobo ukuza kuthi ga ngoku.
UWhatsApp noFacebook bahlawuliswa ngokungathobeli uMthetho woKhuseleko lweDatha
UFacebook noWhatsApp bahlawulisa i-600.000 euros eSpain. Fumana ngakumbi malunga nesohlwayo eziinkampani zombini esizifumeneyo kwilizwe lethu ngokungathobeli uMthetho woKhuseleko lweDatha.
URhulumente waseFinland uthenga i-3,3% yeNokia
URhulumente waseFinland uthenga i3,3% yezabelo zeNokia. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthenga izabelo kurhulumente waseNordic oya kunceda ukukhulisa inkampani.
Inkonzo yasimahla yeGoogle kwi-Intanethi ifika eMexico
Isikhululo sikaGoogle, inkonzo yasimahla yeGoogle kwi-intanethi ifike nje eMexico apho sinokufumana khona uqhagamshelo lwasimahla lweWi-Fi kunye nenani elikhulu loololiwe, ibhasi kunye neendawo zokuthenga.
IVivo V9, amanqaku, ukumilisela ividiyo kunye nemifanekiso evuzayo
Sineempawu zeVivo V9, ividiyo esemthethweni ekhutshwe yinkampani, kunye nemifanekiso evuzayo.
I-YouTube ye-Android iqala ukuba yimowudi emnyama
Imowudi emnyama iza kwi-YouTube ye-Android kwezi ntsuku. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo lokuba le nto intsha isizisa kwisicelo esidumileyo kwezi ntsuku.
Imifanekiso evuzayo yeVivo V9 ibonisa iikhamera ezimbini zangasemva kunye nescreen esingenamda
Kwiiveki ezimbalwa emva kokumiliselwa kwayo, iVivo V9 ibonisa ezinye zeempawu zayo ngokusebenzisa imifanekiso emibini evuzayo.
I-Android iya kukhuseleka kumaxhoba obundlobongela obuphathelele kwezesini
I-Android iya kukhuseleka kumaxhoba obundlobongela obuphathelele kwezesini. Fumana ngakumbi malunga nemibono yeenkampani ezinje nge-BQ kunye ne-Sony ye-Android ukunceda ukukhusela amaxhoba obundlobongela obuphathelele kwezesini.
Sinikela kuwe iNubia N3, iselfowuni ebalaseleyo enebhetri ye-5000mAh
I-Nubia N3 isandula ukwaziswa ngebhetri enkulu yezigidi ezingama-5.000 6.01 eziya kuthi zisinike inkululeko engacingekiyo, enescreen se-18-intshi kwifomathi ye-9: XNUMX, kunye nezinye izinto eziza kuyibeka ngokucacileyo kwingxabano Uluhlu oluqhelekileyo kulo nyaka. Yazi!
Ngoku kungumsindo, iApple iyakususa inotshi kunyaka olandelayo
Ngoku ukuba inotshi ye-iPhone X ikhutshelwe ngabenzi abangaphezulu kwamashumi amabini e-Android, yonke into ibonakala ngathi iya kunyamalala kunyaka olandelayo.